“Rugby Tsinjaka Be”: Hidona ny Makis de Madagascar sy ny RC Toulon | NewsMada
Tsy maintsy ahemotra amin’ny taona 2021 ny “Rugby Tsinjaka Be”. “Goavana ny hetsika ka tsy azo atao kitoatoa ny fanomanana”, hoy Rakotomanalina Jean Olivier (Veve), tomponandraikitry ny SPC Press Evenement, mpikarakara.
Gazety Taratra (*): Tapitra ny fihibohana, hanao ahoana ny “Rugby Tsinjaka Be”?
Rakotomanalaina Jean Olivier (Veve) (-): Ara-bakiteny ny fahataperany fa ny fepetra ara-pahasalamana, mbola mitoetra. Noho izany, miantso ny mpanao fanatanjahantena rehetra hanaja ireo fenitra napetraky ny fitondrana. Ho an’ny “Rugby Tsinjaka Be”, tsy maintsy nahemotra satria tsy ho tratra ny fikarakarana ny hetsika, izay ho goavana noho ny fankalazana ny fahadimy taon’ny SPC Press Evenement, mpikarakara.
*Raha hihemotra, hotanterahina amin’ny fotoana mahazatra ihany ve?
– Ezahinay mpikarakara hotanterahina amin’ny taona 2021 ity andiany fahadimy ity, ary hotazonina amin’ny fotoana efa mahazatra ireo mpankafy ny “Rugby Tsinjaka Be” izany, ny volana septambra na ny oktobra.
* Hisy fiavahana amin’ireo andiany efa vita ve ity hatao amin’ny taona ho avy ity?
– Tena hiavaka tokoa satria handray anjara ny Makis de Madagascar ka hifandona amin’ny RC Toulon, Frantsa. Fiaraha-miasa amin’ny Malagasy rugby io, izay angatahina fankatoavana ary isaorana manokana satria nanampy hatrany ny “Rugby Tsinjaka Be”. Efa tontosa tamin’ity ny fifanarahana, saingy tsy raikitra ny lalao noho ny Covid-19.
*Hanao ahoana àry ny ho fisehon’ny hetsika amin’izany?
– Fampiarahana ny baolina lavalava sy ny rindran-kira ny “Rugby Tsinjaka Be”. Amin’ity, hisy andian-javatra maro, mety handeha irery ny hirahira, toy izany koa ny fanatanjahantena, nefa mety hiara-dalana toy ny mahazatra. Hatao ao anaty toerana iray ireo rehetra ireo. Ankoatra izay, hisy taranja hafa handray anjara. Ho goavambe ny amboara fa tsy hijanona amin’ny lelavola sy omby mifaha, toy ny mahazatra fotsiny.
*: Inona ny hafatra ho an’ny mpankafy?
-: Manome toky anareo ny SPC Press Evenement fa hetsika tsara sy miavaka tsy mbola fahita hatramin’izay ny hatolotra amin’ny 2021. Tsy avelantsika handalo fotsiny io fahadimy taona io fa tena hatao misongadina. Mankahery ny rehetra hitandrina hatrany ary hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana fa tsy mbola resy tanteraka akory ny Covid-19 hahazoantsika mifety tsara amin’ny taona ho avy.